🥇 ▷ Waxay u muuqataa in Samsung ay rabto inay ku dhaceyso nabad gelinta taxanaha Note ee sanadka 2019 si loogu daro taxanaha Galaxy S ✅
Waxay u muuqataa in Samsung ay rabto inay ku dhaceyso nabad gelinta taxanaha Note ee sanadka 2019 si loogu daro taxanaha Galaxy S
Markii ugu horreysay ee Galaxy Note soo baxay, Galaxy S2 wuxuu ku sugnaa suuqa. Waxaa jira kala duwanaanta cabirka waxay ahayd mid aad u habboon (kii hore wuxuu lahaa bandhig muuqaal ah 5.3,, kan labaadna wuxuu lahaa muujinta 4.3 ″). Muddo sanado ah labada xariilood ayaa noqday weligaa soo dhowaada, iyo maadaama moodooyinka “Plus” sidoo kale ay yimaadeen, farqiga ayaa ciriiriyey. Marka maxaad ugu biirin weyday?
Sida ay sheegayan wararka xanta ah qaarkood madaxweyne ku xigeenka Samsung Lee u socon lahaa gabi ahaanba dib u eegida khadka toosan ee taleefannada casriga ee lasoo saaray, laga bilaabo qaybta sare ee-ilaa-waaxda dhaqaalaha, taas oo wershadaha Shiinaha ay nadiifinayaan suuqa.
Dib-u-habeynta qaybta sare waxaa laga yaabaa inay ka miro dhaliso midowga u dhexeeya taxanaha S + iyo note. Laga soo bilaabo sanadkii la soo dhaafay S8 + iyo note 8 (laakiin waxaan u maleynaynaa inaysan waxbadan iska badali doonin sanadkaan), labada sadar waxay u noqdeen wax isku mid ah (kaliya fiiri naqshadeynta), sidaa darteedna iibinta taxanaha qoraalka ayaa saameyn ku yeelan doona.
Sanadka soo socda, sidaa darteed, waxaan arki karnaa S10 + oo leh a 6.4 ″ bandhig iyo S Pen. Tan waxay badbaadin doontaa kheyraadka Kharashaadka loogu talagalay horumarinta iyo soosaarista ku dhowaad moodello isku mid ah, iyo wararka xanta ah ee sheegaya in sannadka 2019-ka aan arki doonno seddex moodel oo Galaxy S10 ah ayaa la xoojin doonaa.
Haatan, si kastaba ha noqotee, waxaan ku sii noolaan karnaa oo keliya Qoraallada 9, oo ah inay la mid ahaato cabir la mid ah tii hore (6.38 ″ marka loo barbar dhigo 6.32 ″), laakiin batar aad u badan (4,000 mAh iyo 3,300 mAh). Iibka, si kastaba ha ahaatee, waxaa qiyaasaya Samsung sida ay u kala horeeyaan 12 milyan muunadaha, ayaa 1 milyan in ka badan waxa duubay Note 8.
AKHRISO: Galaxy Note 9 lafteeda ayaa muujinaysa abaalmarin kale
Sidaa darteed waxay umuuqataa in khadka note uu gaari karo terminus, ku biirista khadka ‘Galaxy S’ si loo sameeyo khad la mid ah alaabada. Miyaad ka maqantahay sii deynta sannadlaha Sebtember ee casriga cusub? Yaa garanaya, laga yaabee inaan arki doonno Galaxy X …